Home CLASSIC STARS Eric Cantona Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts
Septambra 7, 2019
Eric Cantona Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts. Ny trosa amin'ny CNN
LB dia manolotra ny tantara feno momba ny lalao taranja baolina kitra miaraka amin'ny anaram-bosotra â € œNy Kingâ € . Ny tantaranay Eric Cantona Childhood Tantara sy Untold Biography Facts dia mitondra aminao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainana sy ny fiakatr'i Eric Cantona. Sary: CNN, Instagram ary Pinterest.
Eny, fantatry ny rehetra ny andraikiny amin'ny famelomana indray ny Manchester United ho hery mpanao baolina amin'ny 1990. Na izany aza, vitsy ihany no mihevitra ny Biography Eric Cantona izay tena mahaliana. Ankehitriny raha tsy misy tohiny, atombohy izany.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Eric Daniel Pierre Cantona dia teraka tamin'ny andro faha-24 ny volana May 1966 tao Marseille any Frantsa. Izy dia faharoa amin'ny zanany telo nateraky ny reniny, Ã ‰ lÃ © onore Raurich ary tamin'i rainy Cantona rainy.
Zazakely Eric Cantona miaraka amin'ny reniny Ã ‰ lÃ © onore Raurich. Sary: Instagram.
Ny zom-pirenen'ny teratany frantsay niaraka tamin'ny italianina, frantsay ary koa ny fototry ny Espaniola-Catalan dia natsangana tao Caillols faritr'i Marseille, ary niara-nihalehibe niaraka tamin'ny rahalahiny Jean Marie sy Joel izy.
Nihalehibe tany amin'ny tany nahaterahany, dia somary mahantra ny fianakavian'i Cantona. Na izany aza, nanana fahazazana mahafinaritra izy izay nampiavaka ny baolina kitra an-dalambe sy fankasitrahana aesthetic ny tany Mediterane izay manodidina ny trano fonenany.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Fanabeazana sy fanabeazana
Tamin'ny fotoana nanoratan'i Cantona an'i 15 dia nanomboka nilalao baolina kitra tamin'ny klioba eo an-toerana i SO Caillolais izay nanomboka ny tenany ho mpiandry tsatokazo nefa tsy ela dia tsikaritr'izy ireo fa ny refin'ny mety ho tanjona dia manakana ny fanararaotana.
Eric Cantona dia 15 taona fony izy nanomboka nilalao ho an'ny klioba eto an-toerana SO Caillolais. Sary: Pinterest.
Araka izany dia nirenireny nankany ambony izy, nankafiziny avokoa ny fizotrany rehetra saingy tsy nijanona teo amin'ny toeran'ny tanjona fanoherana izy. Niditra an-tsehatra tamin'ny lalao 100 mahery ho an'ny SO Caillolais, nametraka sambo ho an'ny club Auxerre i Cantona izay nanantenany hamadika matihanina.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Cantona dia tonga tany Auxerre tamin'ny taona 16, izay samy tsy manan-tsiny. Ny prodigy baolina kitra dia nandany roa taona nizotra tamin'ny laharana mandra-pahatongany farany nanao ny lalao matihanina nandritra ny fandresen'ny ligy 4-0 an'i Nancy.
Sarin'i Eric Cantona ao amin'ny sampana matihanina Auxerre. Sary: Telegraph.
Taorian'izay dia notazonina ny asan'ny Cantona tamin'ny taona 1984 mba ahafahany manao fanompoana nasionaly andefasana azy avy eo. Na dia nanomboka tsara ho an'i Cantona ao Martigues aza ny rehetra, dia ny fehezan-teny izay tsy noforonina nandritra ny taona 7 manaraka.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Road To Fame Tantara
Tao Martigues no nanaovan'i Cantona ny endri-pandresena matihanina voalohany nataony rehefa nokapohiny teo amin'ny tarehy ilay mpiara-miasa taminy. Tamin'ny taona manaraka (1988) dia nandeha daholo izy raha namaha ny mpilalao Nantes, Michel Der Zakarian.
Betsaka ny lamandy sy ny fampiatoana natsangana hanakanana an'i Cantona ny fihoaram-peony nataony dia tsy nahavita namoaka valiny tadiavina satria izy no voarakitra tamin'ny raharaha fifehezana bebe kokoa tany Marseille, Bordeaux, Montpellier ary Nimes izay nanambarany ny fisotroan-dronono voalohany tamin'ny baolina kitra tao 1991.
Eric Cantona dia nalaina amina raharaha famaizana noho ny ampahany tsara amin'ny asany. Sary: Pinterest.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Mitsangàna mba haka tantara
Manao ny torohevitry ny sakaizany akaiky sy mpankafy indrindra â € “ Michel Platini, Nanao comeback i Cantona tamin'ny baolina kitra tamin'ny Sheffield Alarobia izay nahitana azy fohy fohy. Taorian'izay dia nandany volana vitsivitsy tao Leeds United izy ary nanampy ny klioba hahazo ny anaram-boninahitra Premier League.
Ny fiatoana lehibe Cantona dia tsy ela taorian'ny 1993 rehefa nanampy an'i Manchester United izy tamin'ny nandresany ny amboara voalohany tamin'ny taona 26. Miaraka amin'ny hira, Cantona no mpilalao voalohany nahazo ny anaram-boninahitra voalohany tamin'ny ekipa niaraka tamin'ny ekipa samihafa tamin'ny vanim-potoana fahombiazana.
Eric Cantona dia nanampy an'i Manchester United handresy ny amboara amin'ny Ligy Premier amin'ny 1993. Sary: Telegraph.
Vetivety foana i Cantona mandrapahatonga ny varotra ataony amin'ny indostrian'ny fialamboly ho mpilalao. Ny fihodinana voalohany nataony dia tonga taorian'ny fampiatoana 1995 amin'ny baolina kitra nandritra ny filalaovany ny mpilalao rugby ao amin'ny sarimihetsika «comedy» frantsay «bonneur est dans le prÃ © â €. Efa nihetsika tao amin'ny horonantsary marobe izy hatramin'izay niarahana tamin'ny â € œUlysses & Monaâ. Ny ambiny, raha ny nambarany dia tantara.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Avy lavitra ny fahasarotan'ny asany amin'ny lalao baolina kitra, Cantona dia nanambady fanambadiana tsy misy naoty miaraka amin'ny vadiny voalohany Isabelle izay niteraka roa, Raphael sy Josephine talohan'ny nandehanan'izy ireo lalana samy hafa tany 2003.
Nifindra tany i Cantona, nihaona tamin'ny mpilalao sarimihetsika, Rachida Brakni, nandritra ny filalaovany ilay horonantsary Lâ € ™ Outremangeur. Nanomboka niaraka tsy ela izy ireo ary nanomboka nanambady tany 2007. Notahin'i Emir zanany lahy ny fanambadian'izy ireo.
Eric Cantona sy ny vadiny faharoa Rachida Brakni. Sary: Instagram.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Momba ny fiainam-pianakavian'i Cantona, avy amin'ny fianakaviana ambany sokajy amin'ny mpikambana 3 izy. Manome fampahalalana marina momba ny fianakavian'ny fianakaviany avy hatrany izahay.
Momba ny rain'i Eric Cantona: Albert no dadan'i Cantona. Niasa ho mpitsabo aretin-tsaina nandritry ny fahazazan'ny taranja baolina kitra izy ary dia lasa mpanao hosodoko amperinasa. I Cantona dia nampiaiky an'i Albert noho ny fanabeazana azy ireo hitandrina hatrany an'izao tontolo izao, mankasitraka ny hatsarany ary mianara amin'ny voina izay nanjo azy.
Eric Cantona miaraka amin'ny rainy Albert. Sary: Instagram.
Momba ny renin'i Eric Cantona: Ã ‰ lÃ © onore Raurich dia renin'i Cantona. Nanampy an'i Cantona sy ireo rahalahiny izy ary nanana fiantraikany lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'i Cantona. Nanome azy ny fahatokisana ilainy hanehoana ny tenany izy ary nanosika azy ho afaka hanao zavatra izay tadiaviny ny fony.
Momba ny mpiray tampo amin'i Eric Cantona I Cantona dia manana mpirahalahy roa fotsiny, dia ny anadahy iray antsoina hoe Jean Marie ary koa ny zandriny antsoina hoe Joel. I Jean dia niasa ho toy ny mpandraharaha ara-panatanjahantena talohan'ny nidirany tao anatin'ny tetikasa film ary i Joel kosa dia nanana asa baolina tsy dia zakaina alohan'ny handehanany ny faniriana.
Ny rahalahin'i Eric Cantona sy Jean (ankavia) ary i Joel (ankavanana). Sary: Twitter.
Momba ny havan'i Eric Cantona I Dadabe sy renibeny any Cantona dia i Pedro Raurich sy Francesca Farnos raha ny raibeny sy ny renibeny izay i Joseph Cantona sy i Lucienne Thérèse Faglia tsirairay avy. Cantona dia manana ny dadatoany sy ny nenitoany izay mbola tsy fantatra, ary ireo zanavavaviny, zanakavavaviny ary zanak'olo-mpiray tam-po aminy fantatra tamin'ny fotoana nanoratana.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Ny fiainan'ny tena manokana
Mifanohitra amin'ny fiheveran-tena midadasika, tsy manana olana ara-tsaina i Cantona fa toetra izay tsy zakan'ny maro. Ny persona dia maneho ny toetran'ny famantarana zodiak Gemini toy ny fahatsentsenana haingana sy fahatsapana haingana.
Mbola betsaka noho izany izy dia milahatra, manao sary an-tsaina ary misokatra amin'ny fanambarana ny antsipirihany momba ny fiainany manokana sy ny fiainany manokana. Ny tombotsoany sy ny fialamboliny dia misy ny filalaovana baolina kitra amoron-dranomasina, hetsika, fanoratana ary fandaniana fotoana miaraka amin'ny ankohonana sy ny namany.
Eric Cantona dia tia milalao baolina kitra amoron-dranomasina. Sary: Pinterest.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Fiainana momba ny fiainana
Fantatrao ve fa i Catona dia manana tombony harato mihoatra ny $ 25 tapitrisa amin'ny fotoana nanoratana? Ilay mpilalao sarimihetsika mpilalao baolina kitra mpilalao dia nametraka ny fototry ny hareny amin'ny maha mpilalao azy alohan'ny hidirany tanteraka amin'ny fialamboly.
Eric Cantona dia iray amin'ireo angano baolina kitra vitsivitsy izay nahavita lehibe taorian'ny fisotroan-dronono. Sary: Express.
Ny fananana mijoro ho vavolombelona momba ny harena an-tapitrisany sy manome marika ny fandaniany dia ahitana ny tranony X XUMUMmm ao amin'ny distrikan'i Fontenay-sous-Bois manaitra ao Paris. Na dia tsy dia fantatra firy momba ny fanangonana fiara Cantona aza, eritreretina fa manana penchant amin'ny fomban-tsoavaly mahazatra izy, izay mampita ny fahatsarany.
Eric Cantona Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts ' Untold Facts
Misaotra amin'ny famakian-dahatsoratra mandritra ity sehatra ity. Aty, omenay anao ny zavamisy tsy dia fantatra loatra kokoa izay tsy mbola fantatrao momba an'i Eric Cantona.
fivavahana: Cantona dia mbola hampahafantatra am-peo ny fiangonany. Tsy fantatra ho tsy mino an'Andriamanitra koa izy. Na izany aza, mpivavaka izy amin'ny toetra tsara hafa toa ny famoronana, ny advocacy ary ny famerenany.
Nifoka sy nisotro: Tsy mifoka sigara eny amin'ny efijery izy ary misotro tsara. Ny fandinihana akaiky ny endriny mifoka dia manondro fa mifikitra amin'ny sigara sigara izy ireo raha manohitra ny cannabis sy ny mpitrandraka fialamboly hafa.
Nifoka sigara sy nisotro andraikitra i Eric Cantona. Sary nahazoan-tsary: ​​Spool and Pinterest.
Tattoos: Ny angano dia an'ny tanin'ny mpilalao baolina kitra taloha izay tsy manana tatoazy amin'ny fotoana nanoratana. Ary ny tsy fahazoana mankasitraka ny fahazoana ny kanto amin'ny maha-izy azy satria efa ela no lasa ny praiminisitra nataony.
Dikany anarana Fantatrao ve fa ny anarana hoe Eric dia midika hoe "Iray" na "Mpanapaka" fa "Cantona" dia anarana avy any frantsay izay midika hoe "Misaotra". Ankoatr'izay, nomena anarana azy hoe "The King" izy noho ny fahakingan'ny baolina kitra tany Angletera.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaran'i Eric Cantona Childhood sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
vannyhenrico - Janoary 22, 2020
vannyhenrico - Janoary 22, 2020 0
vannyhenrico - Janoary 20, 2020 0
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Febroary 13, 2017
Jolay 25, 2018
Scott McTominay tantaram-pahaterahana tsy dia fantatra loatra momba ny tantaram-pahibemaso